Nọvemba, 2018 ArcGIS-ESRI, Akụziri CAD / GIS
Mgbe anyị na-ahụ na arụmọrụ Smart Campus ArcGIS na ihe aga-eme otú ahụ dị ka njem ụzọ gasị n'etiti a Oche n'okpukpu nke atọ nke ụlọ nke Professional Services na otu na Q Mgbakọ, dị ka a N'ihi nke ma ala ime na mwekota nke BIM data, anyị na-ahụ Njikọ nke Geo-engineering na-abanye n'ọhụụ nkịtị dị nnọọ nso.
Ihe na-echetara anyị, na ndị geomatics na ndị injinia ga-aga n'ihu iji ghọta ụdị, na mmemme mmemme.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche mgbanwe na-agbanwe site na gburugburu desktọọpụ dị arọ na snippets ihe nchọgharị dị mfe. N’ezie onye komputa sayensi nke jiri ihe nkesa GIS mee ihe, Gis Engine ma obu ihe Gis ghapuru aka mgbe ohuru ka akwukwo eji aru oru n’ime ihe. Ekewaputa; Ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na ọ gafere n'elu ozu ili ya.
Ndị gosipụtara webinar na mbụ pụtara na nko dị mma na isiokwu nke iji 3D na ngwa ArcGIS, yana otu o si egosipụta na nyiwe nke: Onye na-ekiri Scene, Maps Story, ma ọ bụ Web App Builder dabere na ebumnuche ọmụmụ.
Ọ dị mkpa na a ga-akọwapụta echiche ndị bụ isi metụtara isiokwu 3D site na mbido, ọkachasị n'ihi na karịrị igosipụta mpịakọta, ọ na-achọ ịhazi usoro. Nakwa akụkụ nke ka dị oke egwu n'ihe gbasara usoro ihe dị mkpa iji rụọ ọrụ metụtara ụdị data a dị iche na 2D, dịka ezigbo kaadị ndịna-emeputa, nkwado OpenGL gụnyere na ihe nchọgharị w / WebGL.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, ka ndị enyi gị kọọrọ ha SELPER, na ihe magburu onwe ya nke njikwa ihe onwunwe na teknụzụ GIS, nke nwere ihe mgbochi n'ihu nsụgharị OpenGL nke kalịnda kaadị Nvidia nke Mahadum ebe e mepụtara ya. Asedbawanye ụba site na ngagharị iwe nke ụmụ akwụkwọ Bogota nke mere ka o sie ike ịme ule zuru oke ụbọchị gara aga.
Tụkwasị na nke ahụ, ha gosipụtara nkedo nkwado iji na-agba ọsọ ngwaọrụ na ngwaọrụ mkpanaka dị ka ekwe ntị ma ọ bụ mbadamba.
Mwepụta igwe na ụzụ
Ihe owuwu ahụ bụ nke ụdị 4.x ma mejupụtara ya na ihe ngosi na wijetị, na mgbakwunye ịnakwere ọtụtụ ozi sitere na isi mmalite data dị iche iche. Ihe owuwu a karịrị 3.x n'ihi na ihe ngosi 3D dị naanị maka ọkwa a. A na-eji ngwaọrụ Webscene na SceneView ejiri jikwaa data 3D ma jikọta ya na API, na mgbakwunye na otu esi etinye usoro 3D na data dị na ngwa ndị gara aga.
isi, nke na-enye ohere ngbanwe nke igwefoto na sava-arụ ọrụ.
goTo: eji mee ihe ngosi dika ihe ịchọrọ ịhụ na 3D, tinyere ị nwere ike ime ihe ngosi na ngwaọrụ a, dika ima itinye ogo ụfọdụ n'isi iji meegharia ihe omuma.
IjiMap: na-ewe nhazi nke echiche ma tinye ya na map 2D
toScreen: na-enye gị ohere igosi ebe dị na map 2D ma debe ya na njedebe 3D
seeTest: ejiri iji chọpụta àgwà ndị nwere isi ihe dị n'ime echiche ahụ
Ha na-akọwa na ndị na-ewu a map 3D nwere otu ngwaọrụ ike otu 2d, dị ka iji basemaps, n'ígwé ma ọ bụ n'ígwé nke na-na-akwado na maka 2D (WMS, Vektọ ma ọ bụ CSV).
Otú ọ dị, a ghaghị iburu n'uche na ebe ejiri 2D enweghị ihe ọmụma nke "Z" (ịdị elu), ọ bụ ya mere ị ga-eji gosi data ọ dị mkpa iji nwee ihe jikọrọ 3D dị ka ígwé ojii, ndị na-atụgharị uchema ọ bụ ele elu. N'ime API i nwere ike ịkpọ ndị a 3D n'ígwé dị ka elu kpọmkwem ihe n'ime anya, n'onyinyo (1) mbụ hụrụ ubi, na ihe oyiyi ahụ (2) dị ka ọ na-agbanwe site na ajụjụ ma ọ bụ nke a mere.
Ha gosipụtara otutu ihe atụ nke otu esi egosi data ahụ, dịka ọmụmaatụ, ihe data SceneLayers (isi), na ihe 3D (3D Objects) na-akwado.
Maka nnukwu obodo, ihe nnọchianya nke ihe 3D bụ ngwá ọrụ dị ike, ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ịhụ, ọ bụghị naanị ọnọdụ mbara igwe nke ihe ahụ, mana olu ya, mmekọrịta ya na gburugburu ebe obibi, yana njirimara dị iche iche nke onye ọ bụla n'ime ha nwere ike ịgbakwunye. ihe ndị ahụ. Ihe onyonyo na-esote na-egosi otu ha siri họrọ ụlọ na enweghị isi na New York City, a ga-ahụkwa njirimara ya niile. N'otu aka ahụ, enwere ike ịkwadebe ọtụtụ ajụjụ dị ka ihe owuwu ndị ahụ, dị ka: ebe ụfọdụ ụlọ ndị nwere oke elu ma ọ bụ nkọwa nke ụzọ kachasị mma dị
Na-akwado njikwa ọkwa dị ka IntegratedMeshLayer, nke bụ ngọngọ nke ozi sitere na sensọ dị ka drones. Ha enweghị ozi dịpụrụ adịpụ nke ọ bụla dị ka onyinyo mbụ, mana ọ bụ ngosipụta nke ozi 3D.
Maka isi igwe, ị nwere ike igwu egwu na nha nke isi ihe iji nwee ọgụgụ isi nke ọma, ebe ọ bụ na ebe ọ bụla nwere ike inwe ọtụtụ ijeri ihe ọmụma, ma ha anaghị anọchite anya ya dị ka ihe 3D n'onwe ya.
Ha gosipụtara ojiji nke ihe atụ na data 3D, nke ewepụtara na mpempe akwụkwọ / mbadamba, yana akara ngosi olu metụtara ihe ndị e kere na 3D. Ndị a nwere ike ịdị n'ụdị akọwapụtara dịka ụdị ihe ahụ dị. Ha gosipụtara ojiji nke a na-akpọ Extrudes ka “agba” nhazi ahụ dabere na njirimara ya,
A na-egosipụta ụdị nke na-enye nke a nwere ike iji: mfe, ebe ihe niile ahụ nwere otu njirimara, nke uniqueValueRenderer ebe ị nwere ike ịkọpụta ihe ahụ, dị ka àgwà, na ClassBreakRenderer ebe a na-ahụ àgwà nke ihe ọ bụla n'ihe banyere otu klas: na nke a, ha gosiri ókè dịpụrụ anya site na ụlọ ọ na-ewe iji nweta usoro usoro njem ọha na eze.
3D wijetị: na ngosipụta ngosi ha gosipụtara na anya dị n'etiti ihe, ma horizontally na ekwesị.
Ịmepụta ngwa: site na ọnọdụ na ihe 3D.
Ọnọdụ SceneView mode: kọwaa ọdịnaya na ụdị nke echiche 3D ma nwee ike ibudata na Portal maka ArcGIS.
Ụdị arụmọrụ: ọ bụghị nanị na-elekwasị anya na akụkụ nke elu, ma na-enye ohere ịlele ebe dị anya n'ụwa.
Building ngwa, Modelling 3D dị ka eziokwu ọkọnọ ohere, edoghi ma ọ bụ na-egosipụta na-akpọ ebe ụfọdụ ndị na-egosi, dị ka tags na ndị na nyiwe dị ka Google Earth, ke idaha 3D
Declutter: eji ọcha ma ọ bụ nyo kpọọ ma ọ bụ ndị e ji mara nke na-chọrọ na-ahụ na map 3D, ezere a otutu kpọọ na-adịghị ekwe ka kwesịrị ekwesị anya, na-eme ka mkpọtụ mgbe n'ịchọpụta ihe kpọmkwem.
Wụpụta Scene Layer
Ibe wijetị: nke ga-ebufe ihe edere na mbụ na ihe 3D
Na-akwado ọtụtụ data: ọ bụghị naanị na otu obodo, ma mba (mba).
Ntụle ntụpọ ígwé ojii
Onyinye nke webinar a na geoengineering
Na nkenke, isiokwu a dị oke mma; icheta na omume di iche iche na Digital Twins na Smart Cities choro na, karia iche banyere njikwa ihe omuma, nke ndi nlere ya kariri nke oma, idozi ya na ime ihe. Ahịa sara mbara, na-ekwe nkwa ma rue ugbua ọ nwere ọtụtụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ngwọta maka ndị ọrụ njedebe; ọ bụ ezie na anyị bụ ndị na-eji teknụzụ eme ngwá ọrụ na-abụghị nke mkpọ, ụzọ ahụ ka siri ike. Nke a pụtara, na-agbanwe akụkụ ndị ọzọ dịka oge, ụgwọ na usoro ndụ nke usoro; ọ bụghị n'ogo data na teknụzụ, nke, dị ka anyị na-ekwusi ike, bụ okwu doro anya, kama ọ bụ na mmezigharị na-egbu mgbu na-arụ ọrụ nke ndụ onye ọrụ tupu ndị nnọchi anya na usoro azụmahịa nke gafere site na ozi gbasara ohere. Site na akụkụ ESRI, iwu ihe owuwu siri ike, n'ihi na agbanyeghị na ị nwere ike iwebata data BIM wuru na Revit, a ka na-ahụta ya dị ka ụwa abụọ dị iche iche chọrọ mgbanwe dị mgbagwoju anya. A ga-eji ọrụ ọhụrụ ahụ mee ihe na ụdị BIM, mana enwere ozi CAD buru oke ibu iji weta ya na ọnọdụ ime ụlọ, yana oghere polygonized, ebe dị elu na usoro dị mma ka dị oke ọnụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na Esri toro otuto, ọ bụ ọganihu na ngosipụta mara mma ma dị mfe. Enwere m ike icheworị mmechuihu nke Don Jack, ya na ngwa ngwa nke «ka anyị mee ka ọ dịrị nfe» ndị isi nke ahịrị kwụ ọtọ nke AutoDesk, na mbubreyo ahụ mana alụmdi na nwunye na-aga nke ọma ebe «ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ArcGIS Pro ngwa»Must ga-ahụrịrị n’okpuru mpempe akwụkwọ dịka akpụkpọ ụkwụ nwere ọtụtụ iberibe na-arụtụ aka na ya mana na-enwe ihe isi ike iji mee ka ihe dị mkpa nsonaazụ nke topography, Industrial Engineering, Civil Engineering and Architecture na-achọ dị mfe. Ma ọ bụ na omume nke ịdị mfe nke eserese nka na GIS tara ahụhụ, ka ga-enwerịrị CAD nkịtị, n'ihi omume ahụ nke ichefu na atụmatụ bụ naanị ọkara, mana na ihe dị mkpa bụ itinye ụlọ ahụ n'ọrụ.
Good omume ịme ngosi uwe GIS, fechaa, lekwasịrị anya abstraction nke eziokwu ga-bara uru n'ihi CAD / BIM ngwakọ, nke maka a mgbe ga-adị ndụ n'ihi doo nke BIM na ọtụtụ mba na-aga n'ihi na ogologo, karịsịa site na ụkpụrụ ineptitude ndị isi ochie na-edekọ na akwụkwọ ozi abụọ mbụ nke ọhụụ AECO.
Ndị a bụ ụfọdụ ọmụmụ na anyị na-akwado ka ị na-emelite, na ọnụ ọnụahịa.
Previous Post«Previous Skrill - ihe ọzọ na Paypal
Next Post Ọrụ nke geotechnologies na conformation nke 3D CadastreNext »